Isebenza kanjani – SurveyFiesta
Guqula ngokuphelele izindlela ezigqugquzela ucwaningo lwakho.Ukwengamela noma ukuphatha imiklamo akukaze kube lula ngalendlela osekuyiyo.
Ngena kwicomputer /Vula noma Qamba i-Account entsha.
Okokuqala ongakwenza ukungena kwi computer noma uqambe /uvule i-Account entsha. Ungavula i-Account ngokugcwalisa ifomu nge-online noma ngokusebenzisa iFacebook yakho noma ugoogle+ account ukuze ukwazi ukungena kwi computer.
Uma-ke sewuyivulile noma sewungenile kwi-Account yakho, into oqala ngayo ukukhetha uhlelo lokukhokha. Sinikeza izinhlelo ezintathu ezehlukene kuxhomekeke ekutheni ibhajethi nezidingo zakho kuhamba kanjani. Uma usivakashela nje ufuna ukubona izinkundla zethu , lolu hlelo Olukhululekile elakho. Amandla agcwele Omklamo wezinkampani ezihlukene ungakwazi ukuvulwa ngezinhlelo zeSilver nePlatinum. Uhlelo lwethu lweZinzululwazi luyaziqhenya ngezinye izinhlelo ezinobuchule ezenzelwe ukusaphotha abafundi basemaNyuvesi ekuloleni amakhono abo kwezocwaningo.
Qamba Umklamo Wamakhasimende
Sebenzisa umklamo wethu onobuhlakani obuphezulu ukuze uziqambele umklamo ongowakho.Imiklamo yamakhasimende ibalulekile.
Uma ufuna ukuzisebenzisela nje iphethini noma umklamo osukhona vele , um kunjalo ungabe usananaza, ngena kwi 'library' ukheyhe leyo ezwana nawe. NjengeMiklamo yamaKhasimende , amaphethini ethu ahambisana ngokugcwele ngokwezidingo zakho.
Yabelana nabanye ngoMklamo wakho
Uma uthanda ungayifaka imininingwane eqondene nawe usebenzisa uhlelo lwethu lwe 'built-in bulk mailing feature' noma unikeze i 'link ' kumklamo wakho usebenzisa indlela ye email noma iziNkundla Zokuxhumana . Imklamo Yezinkampani Ezahlukene inikeza ithuba lokukhululeka lokwabelana nabanye umklamo wakho ngezindlela eziningi. Ukwabelana kwemibono kwizinkundla zokuxhumana kuyenzeka futhi ngokusebenzisa izinkundla zeMklamo yeZinkampani Ezehlukene. Ukuhambisa uMklamo ngokusebenzisa izinkundla zeMiklamo yeZinkampani Ezahlukene kukunika ithuba lokulandelela (monitor) inqubo owenza ngayo nokukhipha izikhumbuzo kanye neminye imigomo ewusizo egqugquzela ukuthi ube yingxenye yale miklamo.
UkuLandelela /ukuMonitha uMklamo wakho
Amathuluzi okuhlela umsebenzi esiwasebenzisayo (administrative tools) enza kube lula ukumonitha umsebenzi wakho, ukukhipha izikhumbuzo kanye nokunye okuhambisana nemiklamo. La mathuluzi ungawasebenzisa noma yinini noma yingaluphi uhlobo lwe'device'.
Sebenzisa uhlelo lwethu lwe 'report generator' ukuthola ukucaciseleka ngokushesha mayelana nocwaningo lwakho. Imibiko (reports) iya 'downlodeka' (downloadable) noma uyibuke 'online'. Yenza loko okufunayo.
Ungakhetha noma yiluphi uhlobo lwesaphothi oludingayo , kuphela nje uma kuhambisana nepulani ojoyinile (subscription plan). Noma ngabe yikuphi okukhethile ngeke size sikushiye ulenga nje. Zama ama' FAQ video kanye nama QuickStart papers.'(umhlahlandlela ).
Mayelana namakilayenti e 'corporate' buka i-'Izixazululo Zebhizinisi yethu.
Ucwaningo oluthole ukuxhaswa
Shona kumathimu ethu ocwaningo alawo maprojekthi asemqoka adinga ompetha abaziwayo. Amathimu ethu angakusiza ngokugcwele ngamadizayni ocwaningo lwakho nokuthi luqale lwenzeke. Udinga ukusithinta nje kuphela ukze ziqale izinto zenzeke.